सबैभन्दा अलग र यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, जानीराखौ - ज्ञानविज्ञान
यी राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई फिदा बनाउँछन् :
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुहरूले आफ्नो श्रीमती, प्रेमिका को हरेक दुख सुख, खुसीमा साथ दिने र रमाउने हुन्छन् ।उनीहरू श्रीमती, प्रेमिकाको प्रेममा पागल समेत बन्न सक्छन् । यस्ता राशि भएका पुरुषले जीवनमा आफ्रनो श्रीमतीको हरेक इच्छा,चाहाना पुरा गर्न सफल भएका हसन्छन् । आफ्नो श्रीमती लाइ धेरै माया गर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले पुष्टि गरेको छ।
ती राशि कुन कुन हुन् त हेर्नुहोस् ।
Don't Miss it मृत्यु भएका मानिस सपनामा देख्दा के हुन्छ ? हेर्नुहोस् १७२ खाले सपनाले दिने फलहरु
Up Next सम्बन्धमा आत्मीयता कसरी ल्याउने ? अब यसरी सम्बन्धलाइ सुमधुर बनाउनुहोस्
यस्ता छन्, ​खुट्टा गन्हाउँने समस्याबाट बच्ने घरेलु उपाय
धेरै मानिसको गर्मीको मौसममा खुट्टा गन्हाउँने गर्छ । धेरै मानिस बसी रहेको बेला एक जनाको मात्र खुट्टा गन्हायो भने त्यसले सबैलाई प्रभावित पर्छ ।…
गहुँको सुक्खा रोटीको सौखिन धेरै हुन्छन् । अधिकांश नेपालीको भान्सामा यस्तो रोटी तयार हुन्छ । उसो त डाइबिटिजजस्ता रोगका लागि…
यी हुन्, लहरेखोकीबाट बच्ने घरेलु उपाय
ज्वानो चार चम्चा जैतूनको तेल तीनचार अलिकति ज्वानो हालेर हलुका तताउनुस् । तेल मनतातो पारेर राति सुत्नुअघि छातीको मालिश गर्नुस्…